Bekily Tafaverin’ny zandary ireo omby 50 voaroba
Nitrangana fanafihana mitam-piadiana tany amin’ny Fokontany Morafeno, kaominina Tanandava Sarisambo, distrikan’i Bekily ny 15 Aprily, tokony ho tamin’ny 1 ora maraina.
Ny solombavam-bahoaka voafidy any an-toerana no nanao ny fampilazana. Roso tamin’ny fanarahan-dia sy fikarohana avy hatrany ireo zandary taorian’izany. Nisy ny fifandonana tamin’ireo dahalo rehefa tonga tao Besandraha. Tafaverina manontolo amin’ny tompony ny omby miisa 50 izay nalain’ny dahalo. Tsy nisy maty na naratra ny fokonolona sy ny zandary izay nanao ny fanarahan-dia. Nanao tari-dositra any anaty ala riry kosa ireo dahalo taorian’izany.